Gareth Southgate oo ka hadlay wararka lala xiriirinayo Chelsea si uu u noqdo badalka Maurizio Sarri – Gool FM
Gareth Southgate oo ka hadlay wararka lala xiriirinayo Chelsea si uu u noqdo badalka Maurizio Sarri
(England) 09 Juunyo 2019. Tababaraha xulka England ee Gareth Southgate ayaa soo xiray suurtagalnimada uu ku noqon karo badalka Maurizio Sarri ee kooxda Chelsea, haddii ay dhacdo in macalinka reer Talyaani uu si rasmi ah kaga dhaqaaqo Blues.
Gareth Southgate ayaa qeyb ka noqday macalimiinta lala xiriirinayo kooxda Chelsea, si ay u noqdaan badalka Maurizio Sarri.
Hadaba Gareth Southgate ayaa wareysi uu bixiyay waxaa soo xigtay wargeyska “L’Equipe” ee dalka France waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan qandaraas kula jiraa England, sidaasi darteed uma badna inaan uga tago shaqo kale”.
“Waxa kaliya ee aan ka fekerayo xiligan ayaa ah qaabka aan sida ugu wanaagsan ugu diyaarin lagaa xulka qaranka England, si ay kaga qeyb galaan Koobka Kooxaha Yurub ee la qaban doono xagaaga soo aadan, waxaana rajeeneynaa in wadankeena uu guulo muhiim ah gaaro”.
Heshiiska Gareth Southgate ee xulka qaranka England wuxuu ku egyahay sanadka 2022, wuxuuna la gaaray xulka lagu naaneyso saddexda libaax guulo muhiim ah mudada uu joogay, iyadoo lagu xasuusto in ay kaalinta afaraad ka galeen koobkii aduunka 2018 ee lagu qabtay dalka Russia.
Miyuu Suarez diyaar u yahay inuu kala qeyb galo xulkiisa Uruguay tartanka Copa America 2019?
Kooxda Elman oo soo tiigsatay kaalinta saddexaad ee horyaalka Somali Premier League, xilli uu saddexleey galabta u saxiixay Maxamed